Wararka - Kala-soocidda Ururka Cardigan.
Qoondaynta Ururka Cardigan.
Sidoo kale loo yaqaan urur heer-weft ah, urur hal dhinac ah. Nidaamka cirbadda tolida: funaanad lagu tolanayo oo leh cirbado buuxa sariir irbad keliya. Dharka ayaa leh ballaadhin ballaadhan oo iskudhaf ah iyo curling guryaha, waana ay fududahay in la kala baxo ka dib markii wareegga wareegga uu jabo.
Sidoo kale loo yaqaan dharka feeraha, waxay ka tirsan tahay isla qaybta 1 + 1 feeraha iyo feeraha 2 + 2. Tolmada waxaa lagu fuliyaa sariirta irbadda laba-laab ah, dhammaan saddex-xagallada ayaa gelaya shaqada, iyo qoto dheerka wareegga waa isku mid. Nidaamka tolnimada: sariiraha irbadaha hore iyo gadaal waxaa lagu habeeyay tolmo buuxa.
-1 + 1 feeraha la xidho
Sidoo kale loo yaqaan feeraha hal. Codso qoorta, xirmooyinka iyo gunta.
-2 + 2 feeraha la xidho
Waxay leedahay heer sare oo ah kordhin xagga dambe ah iyo dabacsanaanta, kala bar kordhinta ayaa laba jibaar ka badan tan dharka caadiga ah ee la tolay.
-Ururka Idling Siping
Sidoo kale loo yaqaan qaab-dhismeedka lakabka hawada feeraha, waa qaab dhismeed isku dhafan oo qaab dhismeedka feeraha ah iyo qaab dhismeedka cirbadda fidsan. Tilmaamaha: Tolmada fidsan ee dhinacyada hore iyo xagga dambe ayaanay isku xirnayn, xaalad dusha sare ah, kana dhumuc weyn tahay unugyada feeraha, oo leh hawo diirran oo wanaagsan, ballaadhin yar oo dhinaca dambe ah, iyo qaab deggan.
Dhar la duubay oo leh sariirta dusha sare ee irbadda oo keliya, oo sidoo kale loo yaqaanno ubax dufan leh oo cirbad leh. Tuujintu waxay sameyn kartaa noocyo kala duwan oo saameyn ah sida qaababka mesh, qaababka aan sinnayn, iyo qaababka midabada leh. Sababtoo ah jiritaanka wareegyo dhaadheer, xoogga dharka ayaa saameyn doona waana sahlan tahay in la ballaariyo dhinaca.
-Ururka Ubax Fat
Ururka Ubaxa Baruurta waa magaca guud ee Ururka Jihua. Marka loo eego dib-u-habeynta ay samaysay tuubada, dusha sare wuxuu sameeyaa qaab isweydaarsi ah, iwm. waxaa jira xirmo hal-saf ah iyo guntin dhowr saf ah; waxaa jira xidid hal irbad ah iyo xidid irbado badan.
Magaca cilmiyaysan ee qaabdhismeedka maroojinta waxaa loo yaqaanaa jiingadda qaabdhismeedka. Adoo dhaqaajinaya sariirta irbadda, tolliinka waxaa lagu tolay sariirta irbadda laba-laab.
-Labab nudaha miisaanka kalluunka
Cudurka labalaabka kalluunka ee loo yaqaan 'Double fish scale' ayaa sidoo kale loo yaqaannaa unugyo aan tolmo lahayn, waxaana sidoo kale loo yaqaannaa irbadda loo yaqaan 'yuanbao double'. Waxaa lagu tolay sariir irbad laba-geesood ah, nuxurkeeduna yahay laba dhinac oo isku laaban. Astaamaha: Labbada miisaanka kalluunka labanlaabma way fududahay in la dheereeyo oo xumaado jihada loo maro, taas oo yaraynaysa qaabka haynta dharka, laakiin haynta diirimaadka ayaa la wanaajiyay, dharkuna wuxuu leeyahay cuf iyo dareen dhumuc leh. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa tolida irbadda.
Jacquard weave waa nooc ka mid ah tolida oo doorta dunta ku jirta koorsada isla markaana sameysa siddooyin kala-goyn ah iyadoo la raacayo shuruudaha qaabka. Marka dunta aan wareegin, guud ahaan waxay dul sabaynaysaa dhabarka dharka oo lagu toli karaa hal sariir irbad. . Astaamaha: Dharka ayaa ka sii dhumuc weyn, ma fududa in wax laga beddelo, ballaadhinta oo lagu daro kala firidh yar, oo leh saameyn midab wanaagsan.
-Ubax ubaxa madhan
Magaca sayniska ee qaabdhismeedka ubaxa madhan waa qaab dhismeedka leno, oo sidoo kale loo yaqaan qaab dhismeedka ubax miro guduud ah, oo lagu toli karo sariir irbad keliya. Cirbadaha tolliinka ah ayaa loo qaabeeyey si dhammaystiran, iyadoo hal maaliyad ah oo ah qaab-dhismeedka aasaasiga ah, tolliinkana waxaa loo wareejiyaa iyadoo loo eegayo qaabka. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qaababka tolida baararka.
Waqtiga boostada: Abriil-19-2021